﻿ ​‘अष्ट्रेलियाका ११ वटा विश्वविद्यालय, कलेजका प्रतिनिधि विराटनगर आउँदैछन्’ (अन्तर्वार्ता)
मङ्गलबार ०९, असोज २०७५
विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया शिक्षाको लागि सहयोग गर्ने शैक्षिक संस्था एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भीसा सर्भिसेसले असोज १० गते विराटनगरमा एजुकेसन सेमिनार गर्दैछ । एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेसको सिड्नीस्थित मुख्य कार्यालयकी एड्मिसन मेनेजर दीक्षा दाहाल यतिखेर नेपाल आएकी छिन् । उनी अष्ट्रेलियाकी रजिष्टर्ड माइग्रेन्ट एजेन्ट तथा क्वालिफाइड एजुकेशन एजेन्ट काउन्सिलरसमेत हुन् । उनीसँग एक्सपर्ट र अष्ट्रेलियन शिक्षाको विषयमा गरिएको कुराकानी :
एक्पर्ट कस्तो संस्था हो ? के–के कामहरु गर्छ ?
विद्यार्थीहरुलाई युनिभर्सिटिहरु छानिदिने, कोर्षहरु छानेर युनिभर्सिटिमा प्रवेश गराउन सहयोग गर्ने संस्था हो । विद्यार्थीले कस्तो खालको कोर्ष गर्न खोजेका छन्, उनीहरुको क्वालिफिकेसन हेरेर, फाइनान्सियल डकुमेन्टहरु हेरेर हामिले कोर्ष रेकोमेन्ड गर्छौँ ।
यसले एउटा त एजुकेशन काउन्सिल लिने काम गर्छ । विद्यार्थीहरुको नेपालबाट भिषा लागेर उता गइसकेपछि काम खोज्नको लागि, रुम खोज्नको लागि मद्दत गर्छौँ । उनीहरुलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्छौं ।
१०० जान विद्यार्थीलाई इटहरी र विराटनगरबाट अष्ट्रेलिया पठाइसक्नु भएको रहेछ, आगामी वर्ष कति विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने लक्ष्य छ ?
दुई सयदेखि तीन सय सम्म विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया पठाउने योजना छ । अष्ट्रेलियामा बसेर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुको संख्या बढ्दो छ । हामीले अहिलेसम्म एप्लाइ गरेका सबै भीसा सक्सेससमेत भएका छन् । त्यसैले यो उपलब्धीलाई आउँदो वर्ष दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेका छौं ।
अस्ट्रेलीया पढ्न जाने विद्यार्थीले के–के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
विद्यार्थीहरुले कुन कोर्ष पढ्न खोजेको हो, कुन युनिभर्सिटिमा जाने हो, त्यो कोर्ष सकिन कति टाइम लाग्छ, कति पैसा आमा बुवाले खर्च गर्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न, राम्ररी बुझ्नुपर्छ । किन भने विदेशी जीवन सजिलो हुँदैन । हामीले उहाँहरुलाई गाइड सर्पोट दिइरहेका हुन्छौँ, तर पनि उहाँहरुले यसबारे आफै आफुले पढ्न जाने युनिभर्सिटिहरुको बारेमा बुझ्ने, कुन ठाउँ जान लागेको हो, त्यो ठाउँको रहनसहन बारे राम्ररी बुझ्ने, त्यहाँको यातायातहरुको बारेमा अगाडी बुझेर जानुभयो भने राम्रो हुन्छ ।
सेमीनार हुँदैछ विराटनगरमा, कस्तो किसिमको सेमीनार हो ? यसबाट विद्यार्थीहरुले के–के लाभ लिन सक्छन् ?
विराटनगरको द बिग होटलमा सेमिनार हुँदैछ १० गते । यो हाम्रो एजुकेशनल सेमिनार हो । अष्ट्रेलियाका ११ वटा कलेज, युनिभर्सिटिका प्रतिनिधिहरु आउँदै हुनुहुन्छ ।
कलेजकै प्रतिनिधि आउने हुँदा ब्याचलर स्टुडेन्टहरुले प्रत्यक्ष जानकारी पाउनेछन् । सिधा सम्पर्क र भेटघाट गरी अष्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाबारे जानकारी लिन सजिलो हुन्छ ।
यो सेमीनारमा को–को आउँदै हुनुहुन्छ ?
यो कार्यक्रममा एक्सपर्ट एजुकेशनका सिइओ सञ्जिव शर्मा आउँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा मेरो टिम मेम्बरहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ । भिक्टोरिया युनिभर्सिटि लगायतका कलेजबाट प्रतिनिधिहरु आउँदै हुनुहुन्छ ।
सेमिनार बीग होटल बिराटनगरमा २६ सेप्टेम्बरमा हुँदैछ । अस्ट्रेलया जान चाहने विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई हामी एकचोटि भेट्न आउनुहोस् भन्न चाहन्छौ ।